taratasy ho an'i Madagasikara - A2M
Retour au blog de ainatia
ho an'i Madagasikara,
Aty amin'ny toerana misy ahy aty dia manembona mafy anao aho amin'izao ora anoratako izao. Reko hatraty ireo ady rehetra ianjadianao, tsapako loatra ny fahoriana sy fahasahirananao ka dia misento mangina ho anao aho. Asa raha fantatrao fa raha misy olona milaza ho tena tia anao dia izaho koa anie ka mba anisan'izy ireny. Eny, tiako loatra ry Gasikarako. Mety efa maro no nitory fitiavana anao toy ny ahy ary nampanantena anao ny kintana amam-bolana kanefa tsy menatra ary tsy manenina akory aza ny nandratra anao ary namotika ny fonao. Hany ka very fanantenana ny vahoakanao. Tsy omeko tsiny ihany izy ireo raha mitady zavatra hafa hamelona fanantenana hafa indray, toa hitako hoe izany no mampiroborobo ny fiangonana sy ny fisisihan'ny olona mino ny fiovan'ny fiainany satria ny misionera koa enjana raha aka fo! Mifanosika ireny olona ireny mamonjy fety isan-karazany hifaliany, hamohizana vetivety ny ola mameno ny andavan'androm-piainany. Miangavy anao re aho e, aza omena ireny misionera sy mpanam-bola mody manao irony tsy dia fahita isan'andro ireny intsony re ny fonao e... Hampijaly anao fotsiny anie izy ireny e! Omeo ahy, omeo ho ahy fa izao ahay ikarakara, izao ahahy hiaro! Tsy hanome toky, sanatria raha hampanantena anao zavatra tsy ho vitako aho saingy fantaro kosa fa hiezaka arak'izay tratry ny heriko aho hitazona anao eto an-tratrako, hitazona anao ho an'ny Malagasy rehetra.Manan-karena anie ianao e, tsy ao an-tsainao mihitsy ve hoe ny harenanao fotsiny no tian'ireny olo-mandalo naka ny fonao ireny natao? Mety tsapanao ihany fa mandefitra loatra ianao ary malemy fanahy loatra hany ka na iza na iza tonga teo ka nahazo toerana tao am-ponao dia namoky tena ary rehefa afa-po dia mahasahy mivarotra anao ho an'ny sasany mihitsy aza, na inona na inona nataon'ireny dia mbola nahavita nisisika hanjaka ao am-ponao foana izy ireny ary tsy menatra mihitsy izy ireo mampahory anao sy ny vahoakanao! Kivy anie aho mifanojo lalana amin'ireny mitovy taona amiko mivari-lavo ireny e! Ny fanabeazana ve no tsy ampy? Manontany tena aho hoe nankaiza ny fahendren-dramalagasy? Hontsa anie aho raha mahita ireny zaza matin'aretina sy tsy manan-kohanina ireny e! Irony hateraka mba hangataka eny an'arabe irony! Irony miezaka ny hanampy ny ray aman-dreniny dia mivarotra ny tenany sy ny ainy! hory anie ny foko mahita ireny tsy manjary mitsetsitra ny harenanao sy manararaotra anao ireny e! Misy anefa harena izay tsy hita afa tsy ao aminao irery ety amin'izao tontolo izao ity, robain'ireo tsy manjary fotsiny! Tsy hitako anefa izay atao amin'izao ankehitriny izao ihany aloha, mbola kely loatra aho eo anatrehan'ny zavatra rehetra fa tsy hoe ny taonako akory no sakana! Ny fitiavana hono mantsy tsy mifidy taona! Kely aho satria tsy manana fahalalana mihoatra ireny mpampanantena gaigy lahy sy gaigy vavy ireny, tsy manam-bola noho ireny ireny miseo manampatra ny herin-karenany ireny! Ary ny mampihomehy ahy dia misy ireo efa fahananao isan'andro kanefa tsy mety voky na efa hatreny an-tena kely aza fa mamatratra ihany izay ao am-bilaninao ihany! Reko hoe nisy tratra hono tao dia notsaraina kanefa na ny mpitsara aza anie ry tiako ka mampanahy ahy e! Ny sazy goragora!Mila mandinin-tena kely ianao re... Tena marina moa! Mivavaka ho anao re aho e! Hatreto aloha dia izay no tena mba vitako, tsy ho ela intsony anefa aho dia ho avy ho anao, ho anao irery ihany satria ny voadiko ho anao haharitra mandrakizay! Mety tsy anisan'ireny niady latsa-drà sy nitolona namohizana ny ainy ireny aho raha hitetika haka ny fonao, tsy mampanantena hanome hery ho anao na fahavononana na hiara-dia na manome fitia miatsara ivelan-tsia na inona koa moa ireny teny hitako rehetra nataon'ireo nilaza ho tianao taloha ireny e!? Nijaly enao ry malalako ary mbola voafatotr'izany fijaliana izany mandrak'ankehitriny. Mba tiako raha fantatrao fa latsa-dranomaso mihitsy aho mieritreritra izany rehetra izany.
Mino aho fa hovakianao tsara ity taratasiko ity ary ho raisinao hanafana kely anao amin'izao ririnina izao, hanazava kely ny alina raha sendra tapaka jiro iny ianao dia ventsoy ao an-tsainao ny firariana fa hahavita hanondrotra anao amin'ny avo ny solofo sy dimbin'ireo olon'ny fo rehetra!
Eny ary fa dia mametraka ny mandram-piresaka ho anao aho ry ilay tokako,
Ainatia Mahefasoa ANDRIANINARIVO,ilay tsy mahafoy anao.
Androany, faha 10 jona 2017, amin'ny sivy ora alina sy enina minitra.
# Posté le samedi 10 juin 2017 14:24
FRENCHLOVE62, Posté le mardi 20 juin 2017 13:34
slt toi ca va bien???jte derange pas jespere??
di moi komen jpeux faire pr voir tn blog secret??
tu peux m y donner acces stp?merci d avance biz oliv
je t'aimerai en silence
Je me relève,je prends une feuille et ma plum... mer. 06 juillet 2016
Il y a des personnes qui ne cessent jamais... mer. 06 juillet 2016